Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseDenmark Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza iNdaba Egcwele Yendaba Ehlose Ukudla nesidlaliso "I-Big Dane“. Indaba yethu yeKasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube yimanje.
The Life and Rise of Kasper Schmeichel. Isikweletu Sezithombe: Ama-SoccerTopTen, I-DailyMail, Twitter futhi Pinterest
Ukuhlaziywa / ukugeleza kufaka phakathi impilo yakhe yobudala / isizinda somndeni, ukwakha imfundo, umsebenzi wokuphila kwangaphambi kwesikhathi, umgwaqo odumile, ukukhuphuka odabeni, impilo yobudlelwano, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila namanye amaqiniso amancane angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uyindodana yalowo owayengowaseManchester United noLean International Legend Peter Schmeichel. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaKasper Schmeichel ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
UKasper Peter Schmeichel wazalwa ngosuku lwe-5th lwe-5 Novemba 1986 kunina uBente Schmeichel (umphathi wendlu) nobaba uPeter Peter Schmeichel (umgadli we-Legendary) edolobheni laseCopenhagen, eDenmark. Hlangana nabazali bakaKasper Schmeichel ngezansi.
Hlangana Nabazali bakaKasper Schmeichel- uPeter noBente. Isikweletu Sezithombe: BillBladet
Umsuka Womndeni: UKasper ngogogo wakhe (umculi waseDenmark) inezimpande zomndeni wakhe Poland futhi HAYI Denmark okuyinto abalandeli bebhola abaningi abajwayele ukuyenza. Uthi bewazi?… Ubabamkhulu wakhe ohamba ngegama elithi Tolek Schmeichel wathuthela eDenmark ezungeze i-1960. Umzukulu kaKasper (Tolek) wayeyingane yempi eyayinobaba wayo (Umzukulu kaKasper) wabulawa njengeSoldier yasePoland phakathi neMpi Yezwe II. Umzukulu wakhe omkhulu ngokuba yiSoldier kusho ukuthi umndeni kaKasper Schmeichel uneMpi Yezempi.
I-Tolek (Umkhulu kaKasper) wasuka ePoland waya eDenmark lapho umkakhe azala khona futhi wakhulisa indodana yakhe eyiNcwadi uPeter Schmeichel. Lokhu kuqina kwengqondo okuluhlaza kwezimpande zomndeni wamasosha, kuhlangene nomzimba onamandla kudluliselwe kuPeter Schmeichel owayesebenzisa ukuzakhela igama ebholeni bese edlulisa izakhi zofuzo endodaneni yakhe ayithandayo uKasper.
Inganekwane uPeter Schmeichel wayeyi-22 lapho umkakhe uBente ezala uKasper, okwamenza waba nguyise okokuqala. UKasper omncane njengoba kubonwe ngezansi wayephila impilo ecebile ngoba ubaba wakhe wayedumile. Wayenguhlobo lwengane enabazali abangakwazi kumnikeze amaqoqo amasha kakhulu wamathoyizi. UKasper akazange akhule yedwa, kodwa eceleni kukadadewabo ohamba ngegama likaCecilie Schmeichel. Ngezansi isithombe somndeni othandekayo phakathi kwama-1990 akuqala.
Izithombe zikaKasper Schmeichel Family ngesikhathi sama-1990s okuqala. Isikweletu Sezithombe-I-DrDk
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umsebenzi we-Buildup ne-Education
Isiphetho Esinqunywe Kuqala: Kusihlwa esihle ehlobo ngonyaka we-1991 ngaphambi kokujoyina i-United, ubaba kaKasper, uPeter Schmeichel wayeseklabhini yeqembu lakhe (Br (ndby IF) leqembu lakhe ebhiyozela isihloko sakhe sesihlanu semidlalo yeligi. Unqume ukuba nephathi encane, wamema isivakashi sakhe iningi labo elalingabalandeli beklabhu.
Ngenkathi abalandeli bemenyiwe futhi bezingena emcimbini, uKasper Schmeichel oneminyaka engu-4 wema phambi komnyango wesango enobuso obunqunyelwe uthi ezivakashi, "Nonke anikwazi ukungena lapha!".........."Yebo, sivunyelwe, samenywa ubaba wakho"Omunye wabo uphendule njengoba ebuyisa uKasper ngobumnene kunina, evumela abalandeli bakhe ukuthi bangene. Iqembu laqhubeka futhi emasontweni ambalwa kamuva, uPeter Schmeichel waqhubeka nomsebenzi wakhe ophumelelayo eManchester United.
Ukushesha phambili kweminye iminyaka ye-25 kamuva, uKasper akazange abonwe emi endleleni yezivakashi - KODWA kulokhu, ngendlela yazo zonke izinhlobo zabaphikisi bebhola bezimisele ukubeka ibhola ngemuva kwakhe. Manje ake sikunikeze indaba emfushane yokuthi lolu hambo lwaqala kanjani.
Okwamshukumisela ukuba Alandele ezinyathelweni zikayise: Eminyakeni engu-7 ne-8, ngonyaka we-1992 kanye ne-1993, ubaba kaKasper uPeter wavotelwa IFFHS Igoli Eliphambili Lomhlaba. Ukuba nobaba owaye Not oshaye amagoli amahle nje emhlabeni, kepha obekade ehola uchungechunge lwezihloko neManchester United, kwakulula ngoKasper osemncane ukulandela ezinyathelweni zikayise.
Impumelelo yokuqala kaPeter yashukumisela uKasper ekulandeleni ezinyathelweni zakhe. Isikweletu Sezithombe- I-ScandinavianTraveler, Futhi The42
UKasper uchithe isikhathi sakhe sobuntwana ejabulela ukuphumelela emsebenzini kababa wakhe. Waqala ukufunda eNgilandi ngenxa yomsebenzi kababa wakhe wokudlala. UKasper wayenezifundo zakhe zokuqala IHulme Hall Grammer School itholakala eGreater Manchester. Wayezinikele kwezemidlalo yize efunda izincwadi zakhe. Ngaleso sikhathi nangesikhathi sokuphuma kwesikole, uKaper wayedlala ibhola eligcina amagoli nabangane bakhe phakathi kwabo U-Alex Bruce- indodana kaKasper, owayengumdlali weqembu lesizwe laseManchester United Steve Bruce.
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngenkathi abanye abadlali bebhola bezingane beqala umsebenzi wabo ngokujoyina i-football academy, uKasper waqala ngaphansi kokufundiswa kukababa wakhe. Abaphathi beManchester United bamvumela ukuba alandele ubaba wakhe odume ngokuziqeqesha. Kusenesikhathi, wayekuthanda ukuma ngemuva kwegoli ngenkathi iManchester united legends train. UKasper wayegijima eyolanda isibhamu esingena ndlela ebesiphuthelwe yigoli bese eqhubeka nokuhambela yonke imidlalo e-Old Trafford edumile.
Ubaba kaKasper Schmeichel waqeda umsebenzi wakhe weManchester United ngamanani aphakeme kakhulu ngemuva kokuthi eqondise i-United ukuthi iwine i-1999 Treble. Eminyakeni ye-36, uPeter wafuna ijubane lebhola elincane kancane ePortugal (Sporting CP), intuthuko eyabona wonke umndeni wakwaSchmeichel kubandakanya noKasper omncane ushiya iNgilandi ePortugal.
Ngonyaka we-2000, ngenkathi uKasper ehlala nabazali bakhe ePortugal, wazithola wabhalisa e-Estoril football academy eyaziwa kakhulu ngokuthi Grupo Desportivo Estoril. Ngesikhathi esesikhungweni semfundo ephakeme, uKasper uqhubeke nokulandela ezinyathelweni zikababa wakhe. Izikhathi eziningi ngemuva kwezikhathi zokuqeqeshwa, wayeqhubeka nokuthola ezinye izifundo ezivela kubaba wakhe e-Sporting CP. Lokhu kwenzeke unyaka wonke we-1999 kuya ku-2001.
UKasper Schmeichel wafunda kakhulu kubaba wakhe ezinsukwini zakhe zokuqala zokusebenza. Isikweletu Sezithombe- m80
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Ngemuva kweminyaka emibili ePortugal, umndeni wakwaSchmeichel wezwa ukuthi sekuyisikhathi sokuhlala ezweni. Futhi, uKasper wanquma ukushiya ikilabhu kulokhu, kulandela ubaba wakhe ebuyela e-England lapho aqala khona ukudlala i-Aston Villa. UKasper usayine neMan City kwathi ngemuva kwezinyanga ezithile wabuye wahlangana nobaba wakhe, kulokhu ekilabhini efanayo. Uthi bewazi?… Bobabili ubaba nendodana benza umlando ngokuba ngabokuqala ukushaya amagoli bedlalela iMan City academy kanye nesikhundla esiphezulu ngonyaka we-2002.
Isithombe esingajwayelekile sikaKasper Schmeichel noyise uPeter lapho bobabili bedlalela iManchester City ngonyaka we-2002. Isikweletu Sezithombe: TheGuardian
Lapho i-Going Got Tough yeKasper: Ngenxa yokuthi wayengavuthiwe ukuthola iziqu zemfundo ephakeme, uKasper wayengeke akwazi ukugcwalisa kalula izicathulo zikababa wakhe ngemuva nje kokuthatha umhlalaphansi neCity kanye nebhola ngonyaka ka-2003. Njengoba ihluleka ukulinda, iCity yaqhubeka nokuthenga uDavid James ogcwalise indawo kaPeter Schmeichel.
Ngemuva kokuphothulwa kwebhola lentsha, uKasper owazitshela ukuthi uzothatha uhambo olucwilisa ebholeni eliphezulu akazange azibone izinto zizomhambela njengoba bekuhleliwe. Ngaleso sikhathi, indawo okwakuhlalwa kuyo amagoli aphezulu ibisidlula Joe Hart owayekhuphuke ngokuqinile futhi wabonakala engenakuphikwa. Le ntuthuko ishiye uKasper ompofu ekukhungathekeni.
ICasper Schmeichel- Imbangi kaJoe Hart. Isikweletu Sezithombe: IPlanethiFootball. Isikweletu: I-PlanetFootball
Njengoba sebenze ngempumelelo engaka kule minyaka edlule, bekunzima emndenini wakwaSchmeichel ukubhekana nokuzibonela ngokwabo bewela i-oda elibhokisa e-Eastlands. Ibheka izinketho, uKasper Schmeichel waqala ukuhamba ngezinyoka nezitebhisi ezahlukahlukene ukuze aqashelwe njengomgadli weqembu lokuqala. Ukhokhele izindleko zakhe ngokuya ngemalimboleko ukusuka ku-2006 kuya ku-2009 futhi waqala umsebenzi wakhe omkhulu masisha naye Bury, Falkirk kanye Notts County kanye Leeds.
Ekugcineni kwafika umsindisi ozokusindisa uKasper. Ngalesi sikhathi, kwakungeyena ubaba wakhe omkhulu, kepha umphathi we-Notts County, uSven-Göran Eriksson owamsiza ukuthi aqinisekise ukuthi iqembu lakhe lalihlose ukushaya amagoli okokuqala neLeicester. Ukuqinisekisile uKasper, umgadli wakhe ozinikela egoli kwi-27th kaJuni 2011.
USven Goran Eriksson usize uKasper Schmeichel ukuthi aqinisekise indawo yakhe eLeicester ngemuva kokuthi laba bobabili basebenzisane eNotts County. Isikweletu Sezithombe- I-DailyMail
Uthi bewazi?… KwakunguSven-Göran Eriksson ophethe i-Ivory Coast kwiNdebe Yomhlaba wonke ye-2010.
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
UKasper Schmeichel ubuyisele lo msbenzi kumphathi wakhe ngokumnika amashidi ahlanzekile we-17 futhi asindise izinhlawulo ezine kuyo yonke imidlalo ye-52. Ukwenza kwakhe kahle ngesizini ye2011-12 kumenze waba ngumdlali weqembu le-Player of the Year kanye ne-Players 'Player of the Year.
Esikhundleni sokuthatha imali enkulu, uKasper wanquma ukusiza iLeicester ukuba idume ebholeni laseNgilandi. Ngesizini ye-2013-14, amashidi akhe ahlanzekile ayisishiyagalolunye kanye nemidlalo ye-19-engaphendulwanga eqala ukuqalwa ngoDisemba kuya ku-Ephreli isize isiqiniseko sokuthi iLeicester inyuswe iligi kaNdunankulu ngemidlalo eyisithupha.
Usuku olukhulu lweDane lwafika kwi-2nd kaMeyi 2016, lapho asiza iqembu lakhe ukunqoba isicoco sePremier League eminyakeni engu-29. Uthi bewazi?… Kwakuyiminyaka efanayo nosuku lwekhalenda olufanayo Ubaba kaKasper wawina isicoco sokuqala sePremier League e-1993.
UKasper wawina isicoco sePremier League eminyakeni engu-29, iminyaka efanayo nosuku lekhalenda elifanayo lapho uyise ewina isicoco esifanayo ku-1993. Isikweletu Sezithombe: Instagram futhi Twitter.
Ukwakha irekhodi lomhlaba, abakwaSchmeichels baba ukuphela kwendodana nendodana yokuwina iPremier League nokuba sesimweni esifanayo ukwenza lokho. Ngesikhathi sokuloba, uKasper wayesanda kwenza ubaba wakhe wadonsa kanzima njengoba evuma ukuthi azange afinyelele ku-0-9 yakhe ngesikhathi kwehlulwa eSouthampton ngosuku lwe-25 ngo-Okthoba 2019.
UKasper Schmeichel wavumela imigomo ye-0 ekuchithweni kwe-0-9 eSouthampton. Isikweletu Sezithombe- Independent futhi I-SkySports
Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngemuva komshayi magoli ophumelele kuPeter, bekukhona indodana eKasper. Futhi enhliziyweni yeKasper, kwafika UTHANDO yakha intombazane ebukhazikhazi eyake yagoqa amehlo ayo ngaphambi kokuba yintombazane ngonyaka we-2004. UStine Gyldenbrand uyintokazi yaseDenmark owazalwa ngoJan 1985, okusho ukuthi ucishe abe ngu-2 iminyaka emdala kunoKasper. Wasukuma waquleka lapho eqala ukuthandana noKasper ngonyaka wokugcina wobusha bakhe e-2004, ngaleso sikhathi, uKasper wayeneminyaka engu-17 kuphela.
UKasper Schmeichel waqala ukuthandana noStine Gyldenbrand eneminyaka engu-17. Image Isikweletu- boha-byli
Ngosuku oluhle abahlangana ngalo, uStine Gyldenbrand wayesanda kuba ngumfundi owabhalisa ukufunda iziqu kubabelethisi e-University of Chester. Ngemuva kokuthweswa iziqu kwakhe e-2009, waqala ukusebenza esibhedlela esiseduze naseBirmingham kwathi ngonyaka olandelayo (2010), bobabili abathandi bamukela ingane yabo yokuqala, indodana bayiqamba ngokuthi nguMax Schmeichel. Ngemuva kweminyaka emibili (2012), baba no-Isabella Schmeichel.
Hlangana noMfazi kaKasper Schmeichel, uStine Gyldenbrand indodana yakhe, uMax Schmeichel nendodakazi, u-Isabella Schmeichel. Isikweletu Sezithombe- Pinterest
UKasper ubethandana nentombi yakhe nonina wezingane zakhe ngeminyaka ye-11 ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuphakamisa nokuthi abophe ifindo nayo. Bobabili abathandi bashada e2015 kwabathandwayo I-Egebæksvang Kirke Church etholakala ezweni lakubo eDenmark. Umkhosi wawunawo wonke amalungu omndeni ayethamele.
UKasper Schmeichel wafanekisa nomkakhe ngosuku lwabo lomshado. Isikweletu Sezithombe- Baomoi
Kusukela ngemuva komshado wabo, uStine wayesadlulela phambili ezifundweni zakhe. Usanda kuphothula izifundo zakhe zokuba ngumuntu oqeqeshela yena ukuthuthukisa ulwazi lokusiza abesifazane abakhulelwe kanye nokuzalwa ngemuva kokuthola impilo enempilo. Njengasikhathi sokubhala, uStine njengamanje ugijimisa izisekelo ezimbili ezibizwe ngokuthi; The IGyldenbrand Schmeichel Foundation futhi fodboldfonden nomyeni wakhe nomngane wakhe, uChristine Kvist.
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi amaqiniso kaKasper Schmeichel Personal Life off the pitch kungakusiza uthole isithombe esingcono sobuntu bakhe.
Ukwazi uKasper Schmeichel Life Life off-the-Pitch. Isikweletu Sezithombe- Twitter
Ukuqala, uKasper ungumuntu onobuhlakani, onesibindi futhi onothando. Ungumholi weqiniso ozinikele kakhulu kulokho akwenzayo kokubili nangaphandle kwephimbo. UKasper uyakwazi ukuzivumelanisa kalula nezindlela ezihlukile zokuziphatha kwabantu ikakhulukazi ukubukwa komphakathi ngokumqhathanisa nobaba wakhe. Ngokusho the Guardian,
“Ukufuna impilo njengegoli akukaze kube ngumsebenzi olula. Ngisho namanje, abantu abangabazi beza ne-wisecrack ethile mayelana nokuthi angisoze ngaba kuhle njengasekuqaleni kukaBaba wami. Ukwahlulelwa ngale ndlela yinto engiye ngazama ukuyiphila ngasese ngangokunokwenzeka. ”
Ukuba ngumuntu wakhe uqobo, ukuba nezimfanelo zakhe siqu, ukuqondisa kwakhe uqobo, isitayela sakhe, izifiso zakhe yilokho uKasper ayefuna.
Naphezu kokuba yi-32 (ngesikhathi sokubhala) futhi unezingane ezimbili, abantu basaqhubeka nokubona uKasper njengendodana yabathile. Kodwa-ke, usakholelwa ekutheni kunabalandeli abaningi abazincomayo ngezinto azifezile ngaphandle kokuphawula amahlaya noma amahlaya.
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Umndeni wakwaSchmeichel ungenye yezindawo eziphumelela kakhulu zomndeni waseDenmark ezihlala e-United Kingdom. Kungumndeni omncane onasohlangothini lwenuzi esikhungweni sodumo lwebhola. Wonke amalungu omndeni wakwaSchmeichel ayizikhulumi zomdabu zombili izilimi zaseDenmark nesiNgisi (isihlonipho saseNyakatho-nesiNgisi).
Amalungu omndeni kaKasper Schmeichel agubha isicoco sakhe sePremier League. Isikweletu Sezithombe- Mirror
NgoYise KaKasper Schmeichel: Njengoba kushiwo ngaphambili, uPeter Schmeichel wayengumshayimagoli omuhle kunabo bonke emhlabeni futhi emlandweni we-Premier Premier League njengoba wabonwa ngesikhathi sakhe eseManchester United. UPitrosi waphila ngokusebenzisa USir Alex Ferguson's Isikhathi segolide eManchester United. Igama "Dane omkhulu', wayedumile ngezinwele zakhe ezi-blond, ifreyimu enkulu nesitayela sokugcina esingenakufinyeleleka.
Kuyamangaza ukuthi indodana kaSchmeichel uKasper yazibona ifa ngesitayela sikayise kanye nohlaka lwayo olukhulu njengoba kuboniswe ngezansi. Bobabili ubaba nendodana bayahloniphana futhi benqabile ukuziqhathanisa nabanye.
Emidlalweni kaBaba uPeter neNdodana kaKasper - Kokubili zingamaNsumansumane. Image Isikweletu- scandinaviantraveler
UPeter Schmeichel ngesikhathi sokuloba uhlukaniswe nonkosikazi wakhe wakudala uBente (mumama kaKasper) kulokhu okubhekwe njengesinqumo esinzima kulo mbhangqwana. Cishe ngoJuni 2019, uPeter Schmeichel washada nomuntu owayekade eyimodeli yePl * yboy- uLaura von Lindholm ngemuva kokuthandana nomuntu omfishane kwa-Espergærde, eDenmark. Isinyathelo sikaKasper Schmeichel, obizwa ngegama elithi Von Lindholm ngudokotela okhethekile wezokudla nokulingisa. Kuncane okwaziwayo ngesizathu esenza uPeter Schmeichel ahlukanise nomkakhe.
Umshado kababa kaKasper Schmeichel. Isikweletu Sezithombe- Ilanga futhi I-DailyMail
Mayelana Nomama KaKasper Schmeichel: UBente Schmeichel unikezwa isikweletu esikhulu ngendlela aphatha ngayo umyeni wakhe nasekhaya ikakhulukazi lapho esenamandla aphezulu wokushaya amagoli. Ngokungafani nomyeni nendodana yakhe, yena uthathe isinqumo esiqinile sokungafuni ukwamukelwa ngumphakathi. Noma kunjalo, ukwahlulela kusuka esithombeni esingezansi (lapho uKasper ewina umklomelo we-2016 Danish Male Player of the Year), umama ophethe kahle owake wadla umcimbi, ekhombisa ukuthi uyaziqhenya kanjani ngokuphumelela kwendodana yakhe.
Umama kaKasper Schmeichel uye waziqhenya kakhulu ngempumelelo eyenziwe yindodana yakhe. Isikweletu Sezithombe: BT futhi BillBladet
Mayelana nodadewabo kaKasper Schmeichel: UCecilie Schmeichel okhule sonke uyindodana kaKasper kuphela, ngaphandle komfowethu (udadewabo) nomfowethu (udadewabo). Ngenxa yobaba wakhe odumile nomfowethu omkhulu (ofanekiswe naye ngezansi), uCecilie uyaziqhenya kakhulu ngokuba nesibongo sakwaSchmeichel.
Hlangana noSista kaKasper Schmeichel- uCecilie Pilkær Schmeichel. Isikweletu Sezithombe: Instagram
Ekhuluma ngesibongo sakhe esidumile nangempilo yomshado, wake wathi;
“Nginesibongo esijwayelekile ngemuva kwami, ngihlala nginethezeka lokuphila kosaziwayo. Manje njengoba sengishadile futhi manje ngimi ngezinyawo zami, ngiphile impilo ejwayelekile ngakolunye uhlangothi lwempilo. ”
UCecilie manje useshade nezingane ezimbili (uNowa noSofie) futhi manje ubizwa ngokuthi uCecilie Pilkær Schmeichel. Uma kuqhathaniswa nokuthunyelwe esiphathweni sakhe seSocial Media, kuvela ukuthi ungumelaphi wezempilo, i-blogger kanye nomqeqeshi wokuzilolonga.
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Ithola iholo lonyaka le-7,800,000 yonyakaUmbiko we-WTFot), kunembile ukusho ukuthi uKasper wenza imali eningi, enye eyanele ukumenza aphile impilo yobukhazikhazi. Indlela yakhe yokuphila exotic eboshelwe ngqo ekusebenzeni kwakhe njengomdlali webhola lezinyawo ibonakala kalula esuka emotweni yakhe eyi-Mercedes eblue.
Imoto kaKasper Schmeichel- Wayeshayela iMercedes njengase2017. Isikweletu Sezithombe- I-DailyMail
Esithombeni esingenhla esiveza okwakhe imoto exotic, unozinti waseDenmark usanda kuthatha ubaba wakhe uPeter bayodla isidlo sasemini endaweni yokudlela yaseSan Carlo Italian ukuyogubha ukunqoba kweqembu lakhe iChampions League lapho libhekene neSevilla.
Ama-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Igloves Yakhe Ehlose Ukuthula: Ukuqonda kahle umphakeli we-UK1 umphakeli wemishini yokufundisa ezemidlalo. Le nkampani isebenzisane kakhulu noKasper ukukhiqiza uhlu lwayo lwamagilavu ​​alibiza ngokuthi ''Amagilavu ​​e-Schmeichology'. Lawa mabanga we-matrix kanye nama-classic glove asevele asetshenziswa ngabanqobi bamagoli amaningi ku-Soccer League.
I-Precision Schmeichology Gloves yaqanjwa ngemuva komndeni wakwaSchmeichel. Isikweletu Sezithombe: PrecisionTraining
Ukuhlonishwa KweNdodana Nobaba: UKasper ongu-32 ngesikhathi sokubhala ugcwele imininingwane ecebile ku-CV yakhe ngokusho kwekhasi lakhe leWikipedia. Uma ubheka lezi zihloniphi ngazinye nezekilabhu ngokucophelela, awukho umdlalo ngokuya ngokuqhathanisa impumelelo yakhe naleyo kababa wakhe oyinganekwane obuye aboniswe isithombe-skrini ngezansi.
The Honours of Kasper Schmeichel. Isikweletu Sezithombe: Independent
UPeter Schmeichel owayeneminyaka engu-32 (afane nendodana yakhe) ngesizini ye-1994 / 1995 wayesezuze okuningi kakhulu emsebenzini wakhe. I-Wikipedia yakhe ihlonipha ukuthi kungani ebukwa kakhulu ngabadlali bebhola, kanye nalabo abasebenza ngamagoli angaphambilini nabamanje njengomunye wabashaye amagoli amakhulu emlandweni webhola lomhlaba.
UPeter Schmeichel's Individual and Club Honours. Isikweletu Sezithombe- EzemidlaloJoe
Umdwebo we-Kasper Schmeichel's: Njengomuntu wezemidlalo, uma kuziwa ekutholeni i-tattoo yakho yokuqala, kunengqondo ukuthi umuntu angafuna okuthile okuncane kakhulu, i-tattoo engafihlwa kalula ezihlotsheni ezithile zomndeni ezingafuna ukukufundisa amahora amaningi ngemiphumela emibi esolwayo. Lokhu kungenzeka kube njalo ngoKasper. Njengoba kubonwe ngezansi, une-tattoo efihlekile eyakhiwe ngakolunye uhlangothi lwengalo yakhe engenhla okunzima ukuyibona.
I-Kasper Schmeichel tattoo. Isikweletu Sezithombe: I-WTFoot
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda yethu i-Kasper Schmeichel Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Man City Football DIary
I-Martin Braithwaite Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Yussuf Poulsen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Lasse Schone Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
I-Kasper Dolberg Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
Andreas Christensen Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Christian Eriksen Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts